Wayne Rooney Oo Sharraxay Waanadii Dhaxal-galka Ahayd Ee Uu Siiyey Memphis Depay Ee Uu Iska Diiday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWayne Rooney Oo Sharraxay Waanadii Dhaxal-galka Ahayd Ee Uu Siiyey Memphis Depay Ee Uu Iska Diiday
Wayne Rooney Oo Sharraxay Waanadii Dhaxal-galka Ahayd Ee Uu Siiyey Memphis Depay Ee Uu Iska Diiday
Memphis Depay ayaa ka mid ah ciyaartoyda wacdaraha ka dhigaya tartanak Euro ee sannadkan, laakiin waxa uu iska diiday inuu qaato talo dhaxal-gal ahayd oo uu siiyey Wayne Rooney markii uu kusoo biiray Manchester United ee uu garoonka tababarka kusoo galay saacad qaali ah oo Rolls Royce ah, jaaket madow oo saan ka samaysan iyo koofiyad.
Laacibkan reer Netherlands ayay Manchester United kasoo iibsatay PSV Eindhoven June 2015 iyadoo kasoo bixisay £31 milyan oo Gini, waxaana markiiba loo dhiibay lambarka caanka ah ee No.7.
Laakiin kooxda kuma sii waarin e wuxuu si degdeg ah uga tegay Old Trafford oo uu saldhigi waayey.
Muddadii uu joogay Manchester United, waxa su’aal la gelinayay qaab nololeedka laacibkan oo ahaa mid aan fiicnayn, kuna dhisnaa faan, musrifnimo iyo xarrago aanu garanayn halka uu la tegayo. Garoonka tababarka Manchester United ayuu ku iman jiray baabuur noociisu yahay Mercedes G-Wagen oo xagga hore lagaga xardhay M7 oo ah lambarka uu u xidhnaa Manchester United ee No.7 iyo magaciisa oo xarafka hore ah.
Maalintii Boxing Day ee 2015, waxay Manchester United la ciyaartay Stoke City laakiin waxa uu sameeyey qald sababay in kooxdiisa laga dhaliyo gool. Tababaraha ayaa go’aansaday inuu beddelo waqtigii nasashada, waxaanu ku amray in maalinta xigta uu tababarka la qaato kooxda da’yarta.
Wayne Rooney wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii ruug-caddaaga ahaa ee joogtay Manchester United, waxaanu talo muhiim ah siiyey Memphis Depay maalintaas.
Rooney ayaa ku yidhi: “Memphis, xoogaa way yara adag tahay, laakiin halkan hala imanin waxyaabaha aad ku madadaalato oo dhan.”
Memphis Depay dheg uma dhigin hadalka Rooney, waxaanu maalintii xigtay la tegay garoonka tababarka kooxda da’yarta ee lagu amray inuu iska xaadiriyo, isagoo xarrago tiicaya. Rooney oo ka sheekaynayay ayaa yidhi: “Wuxuu yimid isagoo xidhan saacad Rolls Royce ah, jaakad maas ka samaysan iyo koofiyad. Waxa aan is weydiiyey, ‘waa maxay ujeeddadiisu?'”
Dhawr bilood kaddib, Depay ayaa lagu canaantay inuu ka qayb-galay xaflad dhalasho saacado kaddib markii ay kooxdiisa soo gaadhay guul-darro qadhaadh oo ay kala kulmeen Sunderland oo horyaalka ka dhacaysay.
Ugu dambayntii, Depay ayaa ka tegay Manchester United sannadkii 2017 waxaanu ku biiray kooxda reer France ee Lyon.